Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fanalefahana ny filozofa Immanuel Kant | Mpampahay aretin-tsaina Ruprecht Sheldrake-Mieritreritra momba ny fahaiza-mika sy ny Telepathy - Fikarohana Reincarnation
Soso-kevitra amin'ny: Terry Oleson. PhD
Ilay namako iray mpiara-miasa amiko sy mpiara-miasa amiko, psikolojia Terry Oleson, PhD, dia nanolotra hevitra ny biolojika anglisy sy ny mpitsabo Rupert Sheldrake, PhD mety ho reincarnation filozofa Alemanina Immanuel Kant.
Tsy niseho tamiko ilay lalao momba ny fiainana taloha, fa rehefa namaky momba ireo roa sy mampitaha ireo endri-tarehy, dia toa lalao fifanintsanana vita amin'ny marina ihany aho.
Taorian'izany, tamin'ny Aogositra 2, 2019, dia nanatrika fivoriana niaraka tamin'ny mpizara malaza malaza eto ambonin'ny tany aho, Kevin Ryerson, izay mandefa fitarihana fanahy na fanahy antsoina hoe Ahtun Re. Niara-niasa tamin'i Kevin tsy tapaka hatramin'ny nanombohan'i 2001 sy i Ahtun Re ahy ny fahaizana mametraka ny lalao mandrindra ny fiainana taloha miaraka amina mari-pahaizana marina.
Ahtun Re dia nanamafy fa i Rupert Sheldrake no teraka tao amin'ny vatana vaovao indray Immanuel Kant.
Immanuel Kant, Intuition sy Telepathy
Kant dia teraka tamin'ny 22 aprily 1714. Ny lohahevitra voalohany nataony dia ny fieritreretana ny endrika sy ny zava-misy. Nomeny ihany koa fa ny intuition dia afaka manome vaovao marina tsy miankina amin'ny fandinihana tanjona na ny antony. Ny hevitr'i Kant momba ny intuition dia mifanaraka amin'ny telepathy.
Ny Kant dia maty tamin'ny Febroary 12,1804.
Rupert Sheldrake, Famandrihana ara-moraly, fahatsapana an-tery ary Telepathy
Rupert Sheldrake dia teraka tany Angletera tamin'ny 28 Jona 1942, 140 taona teo ho eo taorian'ny nahafatesan'i Kant. Sheldrake dia filozofa sy mpahay siansa, manana fironana amin'ny parapsychology, izay fandalinana ny fisehoan-javatra ara-tsaina izay tsy azon'ny siansa orthodoksa hazavaina.
Intuition dia lohahevitra iray fikarohana lehibe momba ny parapsychologists. Tadidio fa ny intuition dia tena nahaliana an'i Immanuel Kant.
Ny sangan'asa voalohany nataon'i Sheldrake dia ny fitadidiana nolovaina tamin'ny natiora, izay mamorona fitadidiana miaraka, izay azon'ny zavamananaina rehetra idirana. Ity fahatsiarovana iraisana ity dia afaka manazava ny fisintomana telepathic ny fampahalalana, dingana iray izay afaka manazava ny fampiasa. Tsarovy fa i Kant dia nanolotra ihany koa fa ny fampahalalana dia azo sintomina ao an-tsaina ivelan'ny fandinihana mivantana.
I Sheldrake dia niantso ny fahatsiarovana izay misy eo amin'ny zavatra rehetra an'ny tsirairay ho toy ny "reson-kevitra moraly." Ny fampifangaroana ireo fihetseham-baton'ny moraly tsirairay avy dia miteraka fahatsiarovan-tena. Sheldrake nanolo-kevitra telepathy eo anelanelan'ny zavamananaina velona dia noho ny fahatapahana izany fahatsiarovan-tena izany.
Mariho fa ny asa soratan'i Kant sy i Sheldrake dia mifantoka indrindra amin'ny intuition sy telepathy.
Tranga iray mahatezitra momba ny Telepathy miaraka amina tupatra
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny endrik'i Immanuel Kant sy i Ruprecht Sheldrake dia mitovy amin'izany. Manokana, manana handrina lehibe sy boribory izy ireo.
Ny talenta sy ny fiainana taloha: Tsy miovaova ny asan'i Kant sy Sheldrake.
Ny fanovana ny fiainam-pirenena sy ny foko: Alemà i Kant fa anglisy i Sheldrake. Ny fahafantarana fa ny zom-pirenena, ny fivavahana, ny firazanana ary ny firehana ara-poko dia afaka miova hatramin'ny androm-piainany mankany amin'ny fiainana iray hafa afaka manampy amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa.
Raha hijery ny raharaha mifandraika amin'izany dia tsidiho ny:
Ny tranga reincarnation dia mampiditra ny mpitondra ny biolojia, ny fitsaboana ary ny psikology
Ny tranga reincarnation dia mirotsaka amin'ny mpitarika ara-panahy